Somali - BBC News Somali_菜鳥集運香港自提點
ONLF: "Waan aaminsannahay aayo ka talinta markii aan xabadda rideynay iyo marka aan qalinka ku hadleyno"
Waxaa haatan labo sano laga joogaa markii dowladda Itoobiya iyo ururka ONLF ay wada gaareen heshiis nabadeed, waxaana halkaas lagu soo afjaray dagaalkii u dhexeeyay ururka iyo dowladda.
Trump oo shaaciyay in Suudaan iyo Israa'iil ay xiriirkooda soo celiyeen
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay Suudaan iyo Israa'iil iney xiriirkooda caadi ku soo celiyeen.
Microphone-kii la xirayay, ama hanjabaadii aheyd in la xiri doono, ayaa u muuqanaysay inay shaqaysay.
Maxaa iskuulkan loogu eedeeyay in uu "argagixinayo" ardeyda?
Dadka isticmaala baraha bulshada Masar ayaa si weyn u hadal hayaa warka ku saabsan in ardey u dhalatay dalkaas lagu khasbay inay xijaabka xirtaan marka ay tegayaan iskuul lagu barto luqadaha oo ku yaalla deegaanka Belbeys oo ka tirsan gobolka Sharqiya.
Dawadan ayaa waxaa la siin doonaa bukaannada ku jira isbitaallada, hsayeeshee hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan caafimaadka ayaa waxa ay sheegaysaa in waxatarkeedu uu yar yahay.
Jaceylka ay dadka Shiinaha u qabaan caanaha ayaa sii krdhayay sanadihii u dambeeyay.
TOOS Trump: "Eeg Hindiya, waa wasakh... hawadu waa wasakh"
Faransiiska oo balaariyay bandowgii dalka saarnaa xilli xaaladaha korona ay cirka isku sii shareerayaan
Duqeyn lala beegsaday Dugsi diinta lagu barto oo carruur lagu laayay
Dunida Iyo Maanta, 16:59, 23 Oktoobar 2020
Idaacadda Duhurnimo, 13:59, 23 Oktoobar 2020
Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 23 Oktoobar 2020
Xiga Idaacadda Subaxnimo, 07:00, 24 Oktoobar 2020
Boqollaal kun oo haween ah ayey sawirradooda oo qaawan ku faafeen baraha bulshada.
Saynab Xaaji Cali Baxsan, waxay ka mid ahayd fanaaniintii yareyd ee aan ka qixin dalka muddadii colaadaha sokeeye ay socdeen.
Maxamed Yusuf Xaaji, wuxuu ahaa wasiirkii Gaashaandhigga ee ciidamada Kenya geliyay Soomaaliya si ay ula dagaallamaan.
Muuqaal si weyn loogu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayaa, haweeneyda oo carruurta ku tuureysay webiga xilli ay taagneyd dusha sare ee meel buunddo ah.
Wargeysada ka soo baxa dalalka Carabta ayaa si weyn u hadal hayay dilkii loo geystay macalinkii Faransiiska u dhashay ka dib markii uu ardeydiisii tusay farshaxan lagu sheegay Nabi Maxmed N.N.K.H.
Qaar ka mid ah wasiirro maamulayay wasaarado muhiim ah ayaa xilkii waayay, halka kuwa cusubna ay xilal kale heleen.